(Re) Dhisida Mustaqbalka: Iskudhaca Qoraxda ee Puerto Rico - Gargaarka Musiibada ee Gargaarka Mutual
Bogga ugu weyn/updates/(Re) Dhisida Mustaqbalka: Midnimada Sollarity ee Puerto Rico
The shabakadaha taageerada labada dhinac ah gudaha Puerto Rico ee ubax ubax ubax ubax ubax u qaaday kadib Hurricane Maria, muuji sida gargaarka iskaashi ee looga jawaabayo musiibooyinka ay u dhisaan awood iyo adkeysiga dhibaatooyinka mustaqbalka, labadaba siyaasadeed iyo kuwa la xiriira cimilada. Xarumahan Centros de Apoyo Mutuo (Xarumaha Gargaarka Mutual) waxay u adeegeen sidii Nuclear loogu talagalay dadaalada samafalka si looga hortago dhulgariirkii dhowaan ka dhacay koonfurta Puerto Rico. Tallaabooyinka ay qaadaan shabakadahahan gargaarka wadaagga ahi waxay ahaayeen tusaalooyin muhiim ah oo ka mid ah fikradaha kacaanka ee is-xukunka iyo is-xukunka.
Iskaashi la leh Rock Spring United Church of Masiix, kaniisad ku saleysan cadaaladda oo ka baxsan gobolka Virginia oo bixisay maalgelin weyn iyo iskaa wax u qabso dadaaladii, oo ay weheliso khibrad farsamo oo ka timid Mashruuca Cagaha iyo Mashruuca Solar Village, si wada jir ah ayaan u awoodnay inaan dib ugu wicno dabaqa koowaad iyo kan labaad oo aan ku rakibno taageerayaal cusub iyo nalalka LED-ka Centro de Apoyo Mutuo Bucarabones Unidos (CAMBU) ee Las Marias, Puerto Rico. Saaxiibbadayada halkan jooga ayaa hadda qorsheynaya inay bulshada u abuuraan sheybaar kombuyuutar oo ay weheliso barnaamijyadooda kale ee ka socda aaggan miyiga ah, dhammaantoodna waxay ku dhammaadaan 100% tamarta la cusboonaysiin karo.
Tabarucayaasha Kaniisadda Rock Spring ee CAMBU ee Las Marias, Puerto Rico
Meel u dhaw, Lares, dugsi la dayacay ayaa ku jira geeddi-socodkii loogu beddelay boos ballaadhan oo gargaar wadaagga ah, oo ah Centro de Apoyo Mutuo Lares. Lares waxay leedahay mid ka mid ah heerarka ugu sarreeya ee barokaca ee bulsho kasta oo jasiiradda ku nool - dad badan ayaan halkan shaqo ka heli karin oo u guuraya San Juan ama ka tagaya jasiiradda gebi ahaanba. Dad ka shaqeeya mashruucan waxay noo sheegeen in, marka laga reebo bixinta guryo deg deg ah, jikada la wadaago iyo goob kulan, ujeedada ugu weyn waxay noqon doontaa wadaagida iyo dhisida xirfadaha lagama maarmaanka u ah dadku inay is taageeraan iyo midba midka kale oo uusan ka tagin Lares si uu uga shaqeeyo San Juan, iyadoo si gaar ah diiradda loo saarayo ismaamulka cuntada iyo agroecology. Mid ka mid ah qabanqaabiyeyaasha ayaa si gaar ah carrabka ugu adkeeyay ahmiyadda madax-bannaanida cuntada ee jasiiradda maadaama in badan oo ka mid ah jasiiraddu ay weli ku tiirsan yihiin soo dejinta cuntooyin badan oo cunto ah.
Nidaam yar oo sawir-qaade ah ayaa lagu rakibay halkan Lares hadda waxaanan ka shaqeynay nadiifinta & soo celinta qolal dhowr ah. Laakiin maadaama aragtidooda ku aaddan boosku sii kordhayo qolal badana la badbaadinayo, waxaan higsaneynaa inaan dhabarkooda la nimaadno oo aan soo noqonno si aan u rakibno qorrax ballaadhan oo joogto ah oo awood u yeelan karta rugta caafimaadka, barnaamijyada cilmiga beeraha, aqoon isweydaarsiyada, xirfadaha, habeennada muusikada iyo wax kasta haddii kale way riyoodaan.
Tabaruciddu waxay xiriir la sameysaa qoraxda dusha sare ee Puerto Rico
Las Carolinas Centro de Apoyo Mutuo waxaa maamula haweenka oo dhan waxayna si joogto ah ugu adeegayeen dadka tan iyo Hurricane Maria, gaar ahaan odayaasha bulshada. Si wada jir ah, waxaan u rakibnay tamarta qorraxda dadka halkan sidoo kale, oo ay la socdaan kuwa cusub, nalalka tamarta wax ku oolka ah, taageerayaasha, iyo qalabka.
Dhameystirka xarkaha Xarunta Gargaarka Mutual ee Las Carolinas ee Puerto Rico
Xarumahaan gargaarka wadaagga ah, iyo inbadan oo iyaga kamid ah, waxay muujinayaan waddo horay loogu maro dhibaatooyinka siyaasadeed, dhaqaale, iyo cimilada. Iyaga oo ku salaynaya aragtidooda ku saabsan isbedelka kacaanka ficil la taaban karo oo lagu taageerayo dadka ka tirsan bulshadooda, waxay dhistayaan mustaqbalka, hal cunno, hal aqoon-isweydaarsi, hal daaweynta acupuncture, hal ficil naxariis, hal ficil oo iska caabin ah, waqti. Anaguna waan ku faraxsanahay inaan ka garab dhisno, hal nal-beddel, hal guddi qoraxda ah, hal saaxiibtinimo mustaqbalka, annaga oo og in wax walba oo jidkayaga ku soo dhacayaan, waan ognahay inaan is-haysanno.
2020-03-02T10:52:47-05:00March 2nd, 2020|updates|